Hery Rajaonarimampianina : “Tsy mora ny fanarenana ny firenena” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Tsy mora ny fanarenana ny firenena”
23/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy am-pihambahambana no nanambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny lahateny nataony omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, nandritra ny lanonana ara-miaramila tamin’ny alalan’ny fanolorana faneva ireo jeneraly miisa 56 vao nahazo izany laharam-boninahitra izany, fa “tokony hampiakatra hatrany ny firenena ny mpanao politika sy ny vahoaka fa tsy variana mifandrirotra sy mifampisintona midina”.
Rehefa nikabary nialohan’ny Filohan’ny Repoblika mantsy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), Béni-Xavier Rasolofonirina, ka namerina sy namintina ny tantaram-pirenena tao anatin’izay 58 taona nahazoana Fahaleovantena izay, ary nitanisa ny tsy fahamarinan-toeran’ny harinkarena faobe nanomboka ny taona 1960, notsindrian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa efa manomboka miarina ny toe-karem-pirenena ankehitriny. Voalaza mantsy fa niakatra ho 4,1% ny harinkarena faobe ankehitriny.
Araka izany, dia nanambara ny Filoham-pirenena fa ity taona 2018 ity no taona hoentina manamafy orina ny fanohizana ny fampisandratana ny firenena. Nohamafisiny fa mora ny mianjera, hoy izy, fa ny mitsangana avy eo no manahirana. “Sarotra ny nanarina ny firenena, izay efa tafalatsaka anaty lavaka. Vitantsika anefa izany, ary efa maro ihany koa ireo ezaka nataon’ny Fitondrana teo amin’ny sehatra maro izay mipaka mivantana amin’ny vahoaka”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatra izay, dia nambaran’ny Filohan’ny Repoblika hatrany fa tsy misy sy tsy hisy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fitoniana izay mitondra amin’ny fahamarinan-toeran’ny Fanjakana amin’ny ankapobeny.
Etsy an-daniny, nanipy hafatra ho an’ny fianakaviamben’ny foloalindahy ihany koa ny Filoham-pirenena, ka nilazany fa tokony hijoro manoloana ireo fanatsatsoana isan-karazany izay voizina amin’izao fotoana izao izy ireo. Nilaza ihany koa izy fa tokony hiaro ny soatovina Repoblikana ny foloalindahy Malagasy, ary hiara-misalahy amin’ny fanandratana ny firenena. Farany, nanipy hafatra ho azy ireo ihany koa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fitandrovana ny fiandrianam-pirenena, ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany mba tena ho “tandroka aron’ny vozona” tokoa…